Despite EU sanctions, cash-hungry Myanmar military offers to accept Euros in upcoming teak auction - EIA
မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုရန် အောက်ပိုင်းကို ဆက်ကြည့်ပါ။
The Myanmar military regime which is about to hold online auctions to sell more than 750 tons of highly sought after teak, despite economic sanctions imposed by the US and EU, has announced it will accept payment in Euros for the first time.
The auctions on 25 March 2022 of teak logs, boards and scantlings are being conducted by the Myanmar Timber Enterprise (MTE), which is controlled by the generals who took over the country inamilitary coup in February 2021 and profit from the sales.
“Any purchase of timber from MTE enables the military to continue committing atrocities against the people of Myanmar, and destroying Myanmar’s forests – it’s blood timber’, said EIA Forest Campaign leader, Faith Doherty.
Teak is highly valued for its durability in marine environments and its exclusivity has made italuxury must-have feature for superyachts like those owned by Russian oligarchs being sought and seized. And EIA has evidence that teak shipments continue to flow out of Myanmar and into the EU market, despite t sanctions in place.
“It is notamere coincidence that MTE is now accepting Euro payments; they make it easier for traders to purchase teak illegally. Any potential European buyers drawn in by the new Euro payment option must note that the EU sanctions prohibit all EU operators from making payments both “directly or indirectly … to or for the benefit of MTE,” Doherty added. “The EU sanctions also cover EU citizens conducting business with MTE but who are not physically located within the EU.”
EIA is alerting all potential buyers based in Canada, the EU, the UK and US – or any buyer using US dollars – looking to purchase teak at the upcoming auctions that they will automatically violate economic sanctions. A purchase of Myanmar timber by an EU operator will not only violate the sanctions, but any subsequent import into the EU will also breachalaw introduced in 2013.
The European Timber Regulation (EUTR), requires importers placing Myanmar timber into the EU market to provide documented evidence that traces the supply chain back to the moment whenatree was felled. However, the EU holdsa‘common position’ that an operator cannot obtain adequate proof that Myanmar timber has been acquired legally.
According to Doherty, the military regime now wants Euros because it’s feeling the impacts of the broad-ranging US sanctions. “The use of US dollars by any buyer to pay MTE is prohibited. So, MTE is seeking to appeal toabroader audience by allowing payment withacurrency that is not de facto prohibited under US sanctions law,” she said.
Paul Woolwich, EIA Head of Communications via press@eia-international.org or +44 (0) 7788442742
62-63 Upper Street London N1 0NY
UK Tel: +44 (0) 20 7354 7960
ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ မှ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ထားသည့်တိုင် ဘဏ္ဍာငွေအလွန်အမင်း လိုအပ်လျက်ရှိသည့် မြန်မာစစ်တပ်သည် မကြာမီကျင်းပမည့် ကျွန်းသစ်လေလံပွဲများတွင် ယူရိုငွေကို လက်ခံမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့တို့မှ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ထားသည့်တိုင် မြန်မာစစ်တပ်သည် လူကြိုက်များသည့် ကျွန်းသစ်တန် ၇၅၀ ကျော်ကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် လေလံတင် ရောင်းချရန် စီစဉ်ထားပြီး၊ ပထမအကြိမ်အနေဖြင့် ယူရိုငွေဖြင့် ပေးချေမှုကို လက်ခံပါမည်ဟု ကြေညာ ထားပါသည်။
၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အာဏာသိမ်းခဲ့သော စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ မြန်မာ့သစ် လုပ်ငန်းသည် မတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၂၂ တွင် ကျွန်းသစ်လုံး၊ ပျဉ်ချပ်၊ သစ်ခွဲသားများကို လေလံတင် ရောင်းချရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိပြီး၊ အဆိုပါရောင်းချမှုမှ ရရှိမည့် ငွေကြေးများသည် ထိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ အတွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။
“မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းရဲ့ သစ်တွေကို ဝယ်ယူခြင်းဟာ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်မှာ စစ်တပ်က ကျူးလွန် လျက်ရှိတဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကို ဆက်လုပ်လုပ်ဆောင်ဖို့ အားပေးရာရောက်ရုံ သာမက၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သစ်တောကို ဖျက်ဆီးရာပါရောက်ပါတယ်။ ဒီသစ်တွေဟာ သွေးစွန်းနေတဲ့ သစ်တွေဖြစ် ပါတယ်” ဟု EIA အဖွဲ့ ၏ သစ်ဆိုင်ရာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခေါင်းဆောင် Faith Doherty က မှတ်ချက်ပြုပါသည်။
ကျွန်းသစ်ကို ပင်လယ်ပြင်တွင် အသုံးပြုရာတွင် တာရှည်ခံသည့်အတွက် အလွန်တန်ဖိုးထားကြသည်။ ကျွန်းသစ်ကို လက်ရှိတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် ရုရှားသူဌေးများပိုင်ဆိုင်သော သင်္ဘောကြီးများ ကဲ့သို့ စိမ်ခံအပျော်စီး​သင်္ဘောများတွင် မဖြစ်မနေအသုံးပြုကြရပါသည်။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ထားလင့်ကစား မြန်မာနိုင်ငံမှ ဥရောပစျေးကွက်သို့ မြန်မာ့ကျွန်းသစ်များ ဆက်လက်တင်ပို့လျက် ရှိကြောင်း EIA အနေဖြင့် သက်သေအထောက်အထားများ တွေ့ရှိထားပါသည်။
“မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ အခုအချိန်မှာ ပေးချေမှုအတွက် ယူရိုငွေကို လက်ခံဖို့ ကြေညာတာဟာ တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ သစ်ကုန်သည်​ေတွ ကျွန်းသစ်တွေကို တရားမဝင် လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပမှ သစ်ကုန်သည်များအနေနဲ့ ယူရိုငွေဖြင့် ဝယ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဂရုပြုရမဲ့ အချက်ကတော့ ဥရောပသမဂ္ဂက​ေန ချမှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုသတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာ ဥရောပမှ ကုန်သည်တွေအားလုံး တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝှက်ပြီးဖြစ်​ေစ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းကို ငွေပေးချေခြင်းကို တားမြစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ကနေချမှတ်ထားသည့် စီးပွားရေးပို့ဆို့မှုတွေထဲမှာ ဥရောပတိုက်မှာ နေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားများကလည်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနဲ့ လုပ်ငန်းအတူ လုပ်ဆောင်ခွင့် မရှိပါဘူး” ဟု Doherty က ဆက်လက် မှတ်ချက်ပြုပါသည်။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ကျင်းပမည့် လေလံပွဲတွင် ကျွန်းသစ်များကိုဝယ်ယူပါက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို အလိုအ​ေလျာက် ချိုးဖောက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ကနေဒါ၊ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့၊ ယူကေနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့မှ (အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် ဝယ်သူများအပါအဝင်) ဝယ်ယူနိုင်ခြေရှိသည့် သစ်ကုန်သည်များအားလုံးကို EIA အနေဖြင့် အသိပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများမှ ကုန်သည်များအနေဖြင့် မြန်မာ့သစ်များကို ဝယ်ယူပါက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ချိုးဖောက်ရုံသာမက၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည့်ဥပဒေအရ ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းသို့ နောက်ပိုင်း ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခွင့်ရရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ။
ဥရောပသမဂ္ဂ သစ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (The European Timber Regulation) အရ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် ကုန်သည်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်များကို ဝင်ယူမည်ဆိုပါက သစ်ပင်ကို ခုတ်လှဲသည့်အချိန်မှစတင်၍ ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကို သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် ကုန်သည်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်များကို တရားဝင် ထုတ်လုပ်ကြောင်း လုံလောက်သည့် သက်သေအထောက်အထား ပြသနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ဟု ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့သည် ဘုံသဘောတူလက်ခံထားကြသည်။
မြန်မာစစ်တပ်အနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ယူရိုငွေကြေးကို လက်ခံလာသည်မှာ ကျယ်ပြန့်လာသော အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု Doherty က မှတ်ချက်ပြုပါသည်။ “မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ပေးချေတာကို ထားမြစ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းဟာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွင် မပါဝင်သည့် ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုကို ခွင့်ပြုပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Doherty က ဆက်လက် မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
EIA အဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံ Paul Woolwich ကို press@eia-international.org (သို့) +44 (0) 7788442742 တို့မှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။